Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » CTO: Mila ny revolisiona fahaiza-manao mba hitazomana ny fifaninanana fizahan-tany any Karaiba
Joe Baker, dean of the School of Hospitality, Tourism and Culinary Arts at Centennial College in Toronto, and member of the board of directors of Tourism HR Canada
Ny revolisiona fahaiza-manao ilaina hitazonana ny fifaninanana fizahan-tany any Karaiba dia ho lohahevitra ifanakalozan-kevitra rehefa mivory ho an'ny matihanina momba ny zon'olombelona manerana ny faritra ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba (CTO) Fihaonambe momba ny fizahan-tany faha-10 an'ny fizahantany ho an'ny olombelona.
Ny kaonferansa, izay hatao ny 20-22 Mey, 2020 ao Nevis, mitondra ny lohahevitra hoe: "Navigating the Next Phase of Caribbean Tourism", dia karakaraina miaraka amin'ny Fahefana fizahan-tany Nevis.
"Rehefa mipoitra eo amin'ny sehatry ny fizahantany manerantany ny hoavin'ny asa, ny fanamby ho an'ny mpampiasa mba hanangona, hihazona ary hampiakatra ny mpiasa ho soatoavina amin'ny fikambanan'izy ireo dia nanjary singa iray tena ilaina amin'ny asa aman-draharaha fizahan-tany mahomby," hoy i Sharon Banfield, CTO's talen'ny fanentanana sy fampandrosoana ny harena. “Saingy misy ny fanakorontanana lehibe eo anelanelan'ny andro ankehitriny sy ny ho avy irina. Io fikorontanana io dia ny indostrian'ny fizahantany miditra amin'ny tontolon'ny fahaizana sy fahaiza-manao. Amin'ny sehatra maro manerantany dia antsoina hoe revolisiona fahaiza-manao izany. ”
Hanatrika ity lohahevitra ity i Joe Baker kanadiana, dekano ao amin'ny School of Hospitality, fizahan-tany ary zavakanto mahandro sakafo ao amin'ny Centennial College any Toronto, ary mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanana ny fizahan-tany HR Canada.
Baker, manam-pahaizana amin'ny fitarihana mpiasa marobe, dia hanao famelabelaran-kevitra mikasika ny fomba fiatrehan'i Canada ny tsy fahampian'ny mpiasa eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany amin'ny alàlan'ny famoronana rafitra fahaiza-manao sy fahaiza-manao ho an'ireo mpampiasa sy mpanabe hiditra sy hitrandrahana hitrandrahana fanambinana.
"Tonga eto amintsika ny vanim-potoana vaovao amin'ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-manao satria voatosika ny mpampiasa hitady sy hanangana mpiasa matanjaka sy mailaka izay mety tsy ho tonga eny am-baravarana miaraka amin'ny fanabeazana sy ny traikefa mifandraika amin'izany," hoy i Banfield. "Ny fotoana dia misy ahafahan'ny mpampiasa mamantatra, manangona ary mampiasa ny fahaiza-manao takiana amin'ny mpiasa vaovao hivoatra sy handray anjara amin'ny fitohanana sy fitomboan'ny fizahantany amin'ny tsena mifaninana mihombo."
Baker, izay manana mari-pahaizana momba ny fanabeazana avy amin'ny Oniversiten'i Toronto, manampahaizana manokana amin'ny fitarihana fampianarana ambony, dia mpandray anjara mavitrika amin'ny famoahana ny varotra sy ny sehatry ny varotra indostrian'ny fizahantany sy ny haino aman-jery. Namolavola sehatra fanentanana tokana izy amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny fanabeazana sy ny indostria hananganana mpiasa fizahan-tany mahomby sy mailaka. Tamin'ny volana Janoary taona 2020 dia nanao fampisehoana mavitrika tao amin'ny Conference Impact Sustainable Travel and fizahan-tany any Victoria, British Columbia, Kanada izay mamaritra ny olana sy ny paikady ilaina amin'ny fanabeazana mba hitondra anjara biriky amin'ny hoavin'ny indostrian'ny fizahantany.
Ny famelabelarany nandritra ny fihaonambe dia iray amin'ireo manampy ny mpampiasa sy ny matihanina HR hahatakatra ny fomba hampivoarana ny fisainan'izy ireo manomboka amin'ny iray amin'ny fanabeazana sy ny traikefa ka hatrany amin'ny iray amin'ny fahaizana sy fahaizana. Hihantsy ny fisainana mahazatra sy hanome ny mpampiasa fahitana ny fomba fanao lehibe ao anatin'ny toeram-piasana izay hitondra anjara biriky amin'ny fahombiazan'ny fandaminana sy ny indostria.